Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1359
Par Taratra sur 15/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Maty tsy tra-drano ilay rangahy vazaha frantsay voatifitra. Teny an-dalana halefa amin’ny fiaramanidina ho any ivelany kosa no maty ramatoa. Dokotera malaza ao Antsiranana ao ireto maty ireto. Manahy fanirahana hamono ny havany… Asan-jiolahy sa irak’olona! Mpivady iray maty notifirin’ny jiolahy tao an-tranony, tany Betahitra, lalana Ramena Antsiranana, ny alin’ny zoma lasa teo. Voan’ny bala […]
Fivelaran’ny kabary : nivoaka ny « Le kabary expliqué et traduit en français »
Par Taratra sur 13/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Nody ventiny ny rano nantsakaina. Nampahafantarina, omaly tetsy amin’ny Alliance française Antananarivo (AFT) Andavamamba, ny fivoahan’ny boky « Le kabary expliqué et traduit en français ». Sanganasan-dRamandraivonona Dera sy Razanamalala Henriette. Boky vaovao, hoenti-mampivelatra ny kabary malagasy maneran-tany. « Tsy maintsy hay sy mazava tsara aloha ny heviny, ny dikany (haiteny, voambolana…) amin’ny teny malagasy, izay vao atao […]
Taorian’ilay seho goavana tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny 13 desambra teo, mahatratra 40 ny fampisehoana hotontosain’ny Team Safelika manerana ny Nosy. Hahitana hetsika mandritra ny roa andro isaky ny toerana lalovany ny « Miara-mifety jiaby ». Ny andro voalohany, atomboka amin’ny « carnaval » lehibe hotarihin’ireo mpilalao sarimihetsika. Tohizana amin’ny fampisehoana natokana ho an’ny olona mahatratra […]
Hira vaovao : “Mbola tia”, fanomezan’i Jirah ho an’ny mpifankatia
Anisan’ireo mpanakanto vao misondrotra kanefa efa mametraka ny anarany i Jirah. Araka ny fampitam-baovao nataony, nisafidy manokana ny fetin’ny mpifankatia izay hankalazaina amin’ity faran’ny herinandro ity izy, hamoahany ny hira noforoniny voalohany. “Mbola tia” rahateo ny lohatenin’ny hira, izay mazava loatra fa miresaka izay fitiavana mivaivay eo amin’ny olon-droa izay. “Fanomezana hatolotro ireo mpifankatia io, […]
Kitra afrikanina : vonona handresy avokoa ny Adema sy ny Cnaps Sport
Par Taratra sur 13/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hifantoka any Harare sy Nairobi avokoa ny sain’ny mpitia baolina kitra, anio asabotsy. Amin’ity tolakandro ity, hiatrika ny lalao mandroso amin’ny fifaninanana afrikanina, ny AS Adema, tompon’ny amboara, sy ny Cnaps Sport, tompondakan’i Madagasikara. Tonga, omaly any Zimbaboe, ny AS Adema, hiatrika ny Harare FC, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf. Efa tamin’ny alakamisy kosa […]
« Précédent 1 … 1 357 1 358 1 359 1 360 1 361 … 1 398 Suivant »